यसकारण आतंक मच्चाउन चाहान्छ भारत
मधेशको नाममा नेपालको पानीमाथी नजर
Thursday, 24 Sep, 2015 11:49 AM
नेपाली सार्वभौमसत्तामाथी प्रहार हुने गरि २४ घण्टामा २ पटक विवादास्पद विज्ञप्ती जारी गरेपछि भारत–नेपालको आगामी सम्वन्धवारे नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । आफुलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने भारतले मधेशमा आफ्नो निहीत स्वार्थ पुरा नहुने देखेपछि नाकावन्दी गर्नेसम्मको धम्की दिन थालेको हो ।
असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारत आतंकीत हुँदै आएको छ । मधेशका जनता र दललाई उक्साएर नेपालमा सधै अस्थीरता देख्न चाहने भारतको सपनामा प्रमुख दलहरुले व्रज प्रहार गरेपछि भारतले नेपाल आतंकका नयाँ नयाँ हतकण्डा अपनाउन थालेको छ । संविधानमा हस्ताक्षर भैसकेपछि विशेष दुतका रुपमा आएका जयशंकरको प्रयास पनि असफल भएपछि भारत सरकार खुलेयाम नेपाललाई चाइलेन्ज गरिरहेको छ ।
आखीर के चाहान्छ भारत ?
राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य वन्न खोजीरहेको भारत आफुलाई दक्षिण एसियाकै ‘वादशाह’ प्रमाणित गर्न चाहान्छ । तर भारतको आफुनजिकका कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसंग सुमधुर सम्वन्ध रहन सकेको छैन् ।
पाकीस्तानसंगको लामो द्धन्द्ध,वङगादेश,श्रीलंका र पछिल्लो समयमा वर्मासंग पनि भारतको सम्वन्ध नराम्रो छ । चिनसंगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भलै व्यापारका लागि चिनले भारतसंग अहिले हात वढाएको किन नहोस । यस्तो अवस्थामा भारतको नजिकको मित्र नेपाल नै हो तर भारतले नेपाललाई मित्रको रुपमा कहिल्यै व्यावहार गर्न खोजेन वरु आफ्नो दवाव र प्रभावमा राख्न खोज्यो ।
राजनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको दवाव कुनै अवस्थामा नेपालले झेल्न सक्यो भने कुनै अवस्थामा सकेन् । सवैतीरबाट दुश्मन कमाइरहेको भारत नेपाललाई आफु अनुकुल चलाउन चाहान्छ । नेपालसंग पनि सम्वन्ध विग्रीए भारतको सुरक्षा चुनौती टाउको दुखाइको विषय वन्नेछ ।
तराइ क्षेत्रसंग जोडीएको खुला सीमा र त्यसमा पनि भारत तराइलाई भैया–भैयाको सम्वन्धको रुपमा व्याख्या गर्न चाहान्छ । भारतले नेपाललाई कत्तिसम्म दवाव दिन्छ भन्ने कुराको रहस्य माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ती कसैको एसक्यान वन्न चाहदैनौबाट थप पुष्टि हुन्छ । मधेशका जनताको सन्टीमेन्टसंग खेलेर भारतले नेपालमा जहिल्यै पनि आफ्नो भुमीका खोज्छ । तर पछिल्लो समयमा भारतको नेपालप्रभाव असफल वन्दै गएको छ ।
त्यसैको कडी हो २४ घण्टामा २ विज्ञप्ती आउनु । नेपालको आन्तरीक मामीलामा भारतले सधै आक्रमण गर्दै आएको हो,तर पछिल्लो समयमा भारत उदाङगो रुपमा आएको छ । नेपालमा स्थीरता कायम हुने हो भने नेपाल सम्वृद्धिको बाटोमा जान्छ र प्रतिस्प्रर्धामा आउछ भन्ने डर पनि भारतलाई छ । आन्तरीक मामीलामा नेपाल रुमलिएको अवस्थामा भारतलाई नेपालमा गेम खेल्न सहज हुने उसको अनुमान छ । नेपालको जलस्रोतमाथी नजर लगाएको भारत ‘एनिहाउ’ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छ जुनसुकै बाटोबाट भएपनि ।
किन आए धम्कीपुर्ण वत्तव्य ?
आफुले भने अनुसार नभएको, आफ्नो आदेशानुसार संविधान नलेखिएको भन्दै भारत के नेपालमा जे पनि गर्न पाउने हो ? त्यसैपनि भारतको विषयमा नेपाल जहिल्यै संवेदनशील रहिआएको छ । संवेदनशीलतालाई नबुझी भारतले नाकावन्दीसम्मको धम्की दियो,घुमाउरो पारामा । नेपालले सुनदेखि नुनसम्म र हिरादेखि जिरासम्म भारतबाट ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ । हाम्रो भारतवाहेक अन्य तेस्रो मुलुकसंग सिधै व्यापार छैन् । भारतबाट एकहप्ता मात्रै सामान आयात नहुने हो भने नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यो सवै वुझेको भारतले भनेको नामने जे पनि गर्छू भनेर धम्की दिएको प्रष्टै वुझ्न सकिन्छ । त्यसो त भारतले २०४५ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउंदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले नेपालमा नाकावन्दी नलगाएका होइनन् । हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर हुथ्यो भने न भारतले नाकाबन्दी लगाउ“छु भनेर घुर्की दिन्थ्यो, न बारम्बार नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
कुटनितिक मर्यादा मिच्दै भारत
तराईमा भैरहेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई मलजल गरेको भारतले त्यही आन्दोलनलाई आधार बनाउंदै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि कुटनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ । र, भारतले अब त खुल्ला रुपमै नेपालमाथि २०४५ सालकै जस्तै आर्थिक नाकावन्दीको रिहल्र्सल गर्न थालेको छ । आफुलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्दै संसारलाई पाठ पढाउने भारतले अर्को सार्वभौम मुलुकमा वनेको संविधानलाई स्वीकार नसक्नु बरु, त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आर्थिक नाकावन्दीको धम्की दिनु यसैको उदाहरण हो ।
नेपालको राजनीति विल्कुल नेपालको आन्तरिक मामिला हो । छिमेकी भएको नाताले भारतले यसमा चासो राख्न सक्छ । आफ्नो सीमा क्षेत्रमा भैरहेको अशान्तिले कतै आफ्नो देशभित्र समस्या पार्ने त हैन भन्ने सम्मको चासो र चिन्ता स्वभाविक छ । त्यसो त, भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालले सदा स्वीकार गरेकै छ । भारतको सुरक्षा चासोको रुपमा रहेको आतकंवाद र नक्कली भारतीय रुपैयांको कारोवारको विषयमा नेपालले भारतलाई सधैं समर्थन गर्दै आएको छ । तर, भारतलाई त यतिले पुगेन । यसपाला भारतले आफ्ना इमान्दार आदेशपालकहरु संविधान लेखनमा पाउन सकेन । भारतीय निर्देशानुसारको संविधान पनि लेखिएन । त्यसैले भारत, दिल्लीबाट नेपालमा गैरकुटनीतिक धम्की सम्प्रेणण गरिरहेको छ । र, आफ्ना दूतहरु पठाएर नेपाली नेताको घरघरमा पुग्दै धम्कीयुक्त सन्देश दिइरहेको छ ।
के नेपालको मामिलामा भारतले निर्देशन दिन पाउंछ ? प्रश्न गम्भीर छ । झण्डै ९० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानमा हिमाल, पहाड र तराइका विषयलाई समेटन प्रयास गरिएको छ, र यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशिल छ । अझ, भनौं भारतको भन्दा कैयौं गुणा प्रगतिशील छ । भारतको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुंदा ६५ प्रतिशत मत मात्र मिलेको थियो, यसपाला नेपालको संविधान ९० प्रतिशतले अनुमोदन भएको छ । सायद, मोदी डक्ट्रिनको नजरमा यो असैह्य भएको हुनुपर्छ । हैन भने भारतले किन संविधानलाई स्वीकार्न सकेन ? वार्ता र संवाद्बाट देशभित्रको समस्या सल्टाउन नेपालले प्रयत्न गरिरहंदा किन भारतले उक्साउने काम मात्र गर्यो ? प्रश्न गम्भीर छ । एकाएक विषेश दुत पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको भारतको प्रयास असफल भएपछि भारतले सीमाबाट भित्रिने सवारी साधन र मालसामान रोक्ने चेतावनी दिएर भारतले नेपाललाई कस्तो मित्र बनाउन खोज्दैछ ?
त्यसो त भारतको चासो संविधानमा होइन, कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनको पानीमा हो भन्नेहरु पनि छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न र मौकामा चौका हान्न सिपालु भारतको पछिल्लो नेपाल कुटनीतिलाई नेपाली नेताहरुले वास्ता गरेनन् । यसबाट रन्थिनएको भारतले नेपाललाई दवावमा राख्न एकपछि अर्को हर्कत गरिरहेको छ । कुटनीतिक मामिलाका जानकार राजेश्वर आचार्य भारतले जारी गरेको पछिल्लो वत्तव्य असोभनीय र अतिशयोक्तिपूर्ण भएको बताउंछन् । भारतले कुटनीतिको मर्यादा नाघेर गरेको पछिल्लो हर्कतले उसको लोकतन्त्रवादी चरित्रलाई समेत उदाङे पारेको छ । भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी कुटनितीज्ञहरु भन्छन्, ‘नेपालले कश्मीर, दार्जलिङ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका विषयमा कहिल्यै बोलेका छैनन् । अरुको आन्तरिक मामिलाबारे बोल्नु भारतका लागि अशोभनिय भएको आचार्यको तर्क छ ।
भारतीय लविङमा को को ?
कतिपय मधेशवादी दलका नेताले त मधेश अलग देश वन्नसक्ने खुलेयाम वत्तव्यवाजी गरेका थिए् । अधिकार नपाए देश टुक्रायाउछौ भन्ने अभिव्यक्तीहरु सार्वजनिक भएपछि प्रमुख तीन दलले संवेदनशिलता देखाएकै हुन् ।
तर माओवादी शान्ती प्रक्रियामा संविधान लेखिनुपर्छ भनेर सवैभन्दा दह्रो अडान लिदै आएका पुर्व प्रधानमन्त्री समेत भैसकेका डा.वावुराम भट्टराई एकाएक युर्टन भएका छन् । मधेशमा समस्या त अधिकार नपाएकालाई अधिकार दिइनुपर्छ तर जसरी वावुराम भट्टराई पछिल्लो समय अभिव्यक्ती दिइरहेका छन त्यो गम्भीर छ भन्नेहरु पनि त्यत्तीकै छन् । नागरिक आन्दोलनक अगुवा वताउने डा सुन्दरमणी दिक्षित पनि यतिवेला डा वावुराम मात्र एकमात्र नेता भएको भन्दै हिडिरहेका छन् ।
भलै उनको आफ्नो विश्लेषण होला तर मंगलवार ९० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको संविधान किन नमान्ने भनेर पत्रकारले प्रश्न गर्दा डा दिक्षितले पत्रकारलाई सरकारको मानिस भएको आरोप लगाएका थिए । वावुरामको पछिल्ला गतिविधीबाट स्वयंम वावुराम पक्षमा लाग्ने माओवादी नेताहरु पनि सन्तृष्ट देखिदैनन् ।
‘गो ब्याक इण्डीया’ तिव्र
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपालमा भारतको विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालप्रति नकारात्मक टिप्पणी र वक्तव्यबाजी गर्दै आएको भारतविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिकबाट व्यापक विरोध सुरु भएको हो । सचेत युवाले काठमाडौंमा स्वतर्फुत निकालेको ¥यालीमा ‘गो ब्याक इन्डिया’ लगायका नारा लगाइएका थिए ।
कार्यक्रममा सचेत युवाका तर्फबाट लेखनाथ न्यौपाने, जागृत रायमाझी, वीरेन्द्र बस्नेत, राजकुमार राईलगायतले उनीहरूलाई राष्ट्रियताको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । नेपाली युवाले ‘गो ब्याक इन्डिया’ नामक फेसबुक पेजसमेत खोलेर गतिविधि थालेका छन् । ‘गो ब्याक इन्डिया’ अभियानमा पाकिस्तानदेखि भारतको पन्जावीसमेत सहभागी रहेका छन् भने यो अकाउन्ट हिजो विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।